ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 8 သင်မေးသင့်မေးဂရိတ်ပထမဦးစွာနေ့စွဲမေးခွန်းများ
အားဖြင့် ဂျနီဖာ Finney
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 20 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများအပေါ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်. သူတို့တစ်တွေဆက်ဆံရေးဦးဆောင်တဲ့သို့မဟုတ်အနည်းငယ်ရက်စွဲများပြီးနောက်အဆုံးသတ်ပါပြီပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ယခုပထမဦးဆုံးအဖွင့်အစည်းအဝေးနှင့်အတူပါလာသည့်ဖိအားနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်သိ. တကယ်တော့, ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမြင့်ဆုံးအာရုံကြော-ယူပြီးအခြေအနေများတစ်ဦးအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်. သို့သော်လည်းငါသည်အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသင်၌ပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်: အောင်မြင်သောပထမဆုံးချိန်းတွေ့ဖို့အဓိကသော့ချက်အေးဆေးဖြစ်, အဆင်ပြေစကားပြောဆို. ဒီကိုအလွယ်တကူကောင်းစွာရွေးချယ်ထားသောပထမဦးဆုံးနေ့စွဲမေးခွန်းတွေကိုတဆင့်ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်.
ဤမေးခွန်းကိုမေးခြင်းအားဖြင့်, သင်ပိုကောင်းသင့်နေ့စွဲရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်တန်ဖိုးများကိုနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်. ဒါ့အပြင်သူတို့လမ်းညွှန်မှုနှင့်အကြံဉာဏ်မှလွှဲသွားလိမ့်မည်ဟုသင့်ကိုအဘယ်သူပြပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, တောင်ကြီးတို့, သို့မဟုတ်တစ်နေရာရာမှာကြား၌, ဤမေးခွန်းကိုသင့်ရဲ့နေ့စွဲများ '' ဇာတ်ကောင်သို့ထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုပေးမည်.
ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့နေ့စွဲများ '' အရသာနှင့်စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြသပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းလိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်လိမ့်မည်မဟုတ်သာ.
ဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေကသင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့နေ့စွဲကိုပြသပါလိမ့်မယ်, အကျိုးစီးပွား, နှင့်ဝါသနာ. သင်နဲ့လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကြည့်ဖို့နောက်ထပ်မေးခွန်းကောင်းဖြစ်ပါသည်.
သင့်ရဲ့နေ့စွဲထမြောက်စေခဲ့ပုံ၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းရယူခြင်းသူတို့မြှင်ဘယ်သို့ပြီးလိမ့်မည်ကိုသင်တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြမည် (သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်, မမြှင်) သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကလေးများ. ဒီအဖြေကိုစသင့်ရက်စွဲအသက်တာ၌ဆက်ဆံခဲ့ပြီးမည်မျှ၏ညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့စရိုက် ပို. ပင်ဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်.
ဓာတုဗေဒနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းမှတပါးအခြားသောဘုရား, သင့်ရဲ့ရက်စွဲကိုဖော်ပြထားတယ်ဘယ်အရည်အသွေးများအနီးကပ်နားထောင်. ဤမေးခွန်းအတွက်အဖြေသူတို့တစ်တွေမိတ်ဖက်ချင်အတိအကျအရာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်. နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, သူတို့စာရင်းပြုစုအရည်အသွေးများယင်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသိမ်းယူကြောင်းသူများဖြစ်ကြ၏.
သင် relive မှကိုချစ်မယ်လို့တစ်ရက်ကဘာလဲ?
အဲဒီမေးခွန်းကိုအတော်လေးသင့်နေ့စွဲရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသို့တစေ့တစောင်းရပေမယ့်သူတို့သင်ကဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအဲဒီအကျဉ်းချုပ်မိနစ်အဘို့ထိုသူတို့နှင့်အတူ relive မှမရသာသင်ကဲ့သို့ပြောနေပါတယ်.
၏သင်တန်းကိုအဲဒီမေးခွန်းတွေပဲပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့ကိုစေ့စေ့နားထောင်အဖြစ်, လွန်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်မဟုတ်, နှင့်စစ်မှန်သောများမှာ, သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးပျော်စရာနေ့စွဲရှိသည်သေချာပါသည်.
Prospective ခွေးပိုင်ရှင်များသည် Bedlam လယ်ယာစစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း